गोरखा दरबारमा जमरा राखियो | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखा दरबारमा जमरा राखियो
Published On : १ कार्तिक २०७७, शनिबार १४:३०
गोरखाको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनकामना र गोरखा दरबारमा घटस्थापनाको दिन आज धार्मिक वीधि पूर्वध बिहान ११ बजेर ४६ मिनेटमा जमरा राखिएको छ । गोरखा दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भुषालका अनुसार कालिका भगवती र गोरखनाथ मन्दिरमा दुई पाथी जौ को जमरा राखिएको हो । यसरी राखिएको जमरा टिकाको दिन कर्मचारी र आसपासका स्थानीय दरवारमा भेला भएर कालिका भगवतीलाई टिका, जमरा लगाएपछि मात्रै घर गएर टिका लगाउने प्रचलन छ । मनकामना मन्दिरमा पनि जमरा राखिएको छ ।
‘घटस्थापनाको दिन देखि दशैँ विषेश पुजा सुरु हुन्छ’ अड्डाका प्रमुख भुषालले भने ‘कोभिडको प्रभावले बिगतमा जस्तो रौनक छैन, नगरी नहुने नित्य पुजा अनुसार यस वर्ष बलि चढ्छ ।’ गोरखा दरवारमा महाअष्टमी र महानवमीको दिन मुख्य बली दिने चलन छ । ३२ वटा बोका, सतार सहित १५ वटा राँगा, १२ वटा भेडा, १३ वटा कुखुरा र भैरवलाई पाँच वटा सुँगुरको बली गत वर्ष चढाइएको थियो । यो वर्ष यी सबै बली दिने तयारी छैन । अत्यावश्यक बली दिने योजनामा दरबार हेरचाह अड्डा रहेको छ । यसरी दिईएको बली प्रसादको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । एकादशीको दिन बाहेक बली दिने परम्परा छ ।
भक्तजनको प्रवेश नै रोकिएकाले सबैका लागि बली खुल्ला गर्ने तयारी नरहेको दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले सुचना जारी गर्दै आन्तरिक पुजा पाठ बाहेक धार्मिक स्थलमा भक्तजन प्रवेश नगर्न नगराउन अनुरोध गरेको छ । भक्तजनका लागि तत्काल मन्दिर खुलाउने योजना नरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले बताए ।
मनकामना भगवतीलाई नियमति बली दिने र घटस्थापनाको दिन राखिएको जमरा टिकाको दिन भक्तजन सहितलाई लगाईदिने प्रचलन थियो । यस वर्ष कोभिडको प्रभावका बिच भक्तजनको लागि मन्दिर प्रवेश बन्द गरिएको छ ।
दशैँभरी विहानैदेखि विषेश पुजा हुने भएकाले भक्तजनको भिँड लाग्ने गथ्यो । यस वर्ष भने सुनसान छ । अहिले गोरखा दरवार पुन निर्माणको क्रममा रहेकाले पुजापाठ गर्न समस्या भएको छ । चार करोड ३७ लाखमा २०७४ कात्तिकमा दुई वर्ष भित्र सिध्याउने गरी ठेक्का लगाइएको दरबार पुन निर्माणको काम सुस्त छ । निर्माण जिम्मा लिएको पचली सिभाको जेभी कन्ट्रक्सन्ले काम ढिलो गरेको दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख हरिप्रसाद भुषालले बताए । अहिले दोस्रो तला निर्माणको काम भईरहेको छ ।